Ilmaha la isu dhalo oo aan Sweden laga ogalaan doonin - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Arkivbild. sawir: Felipe Dana
Ilmaha la isu dhalo oo aan Sweden laga ogalaan doonin
La daabacay onsdag 24 februari 2016 kl 10.23
Waxa la yiraahdo surrogatmoderskap oo micnaheeda yahay in hooyo lagu abuuro ilmo una dhasho cid kale ayaan laga oglaan doonin xarumaha caafimaadka Sweden.
Xataa haddii hooyada lacag ku kireysato uurkeeda ama ay qof kale ku saaciddo minkeeda.
Waaxay aheyd muddo hadda laga joojo saddex sanno markii hey’adda SMER, Statens medicinska – etiska råd, ku dhawaaqdey in waxa la yiraahdo surrogatmoderskap ay tahay farsamo anshax ahaan la aqbali karo haddiihooyaada uurka lagu abuuranayo iyo cidda waalidka ilamaha u noqonaysa uu xiriirdhow ka dhaxeeyo. Tusaale haddii qofka ilmaha lagu abuurayo uu caawinayo walaal ama saaxiib ilmo la’aan heysato oo aysan meesha ku jirin wax lacag ah.
Kaddib markii hey’addan sidan ku dhawaaqdey ayey dowladda waxay u saartayEva Wendel Rosberg in ay ka soo baaraandegto arrintan inta aan Sweden lagaogalaanin.
Maanta ayey hindise arrinkan quseeya ay baarihii dawladdu waxay u gacangelisaywasiirka cadaaladda Morgan Johansson natiijadii baaristeeda. Waxayna ku taliseyin ay mamnuuc ka sii ahaato Sweden waxa la yiraahdo surrogatmoderskap, sida uuweriyey telefishinka SVT.
– Sababta ugu muhiimsan ee aan ku diidnay in laga ogalaado SwedenSurrogatmoderskap waxaa weeye qatarta ah haweenka in lagu cadaadiyo ilmo uurkoodain lagu beero. Waa ballanqaad culeys badan oo qofka uur qaadaha ah dusha uridanayo oo qatarteedana leh hadey ahaan laheyd uurka inta ay sido iyo markafoosha ay timaado. Sidoo kale markaand dhan kasta u rogrognay waxaan arganayqatarta cadaadis iyo qasbid in ay marnaba meesha ka maqneyn, ayey tiri EvaWender Rosberg oo u warameysay telefishinka SVT.